'आँखाभरी तिमी देखे पछि......' | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७८ चैत्र ७ गते ०५:२७
आँखाभरी तिमी देखे पछि,
जीवनमा नयाँ पालुवा पलाँउछ,
लाली गुराँस !
लाली गुराँस नेपालको राष्ट्रिय फूल हो। लालीगुराँसलाई नेपालको राष्ट्रिय फूलको रूपमा २०१९ सालमा मान्यता दिइएको हो। नेपालको संविधान २०७२ ले पनि लालीगुराँसलाई राष्ट्रिय फूलको मान्यता दिएको छ । नेपालको निशान छापमा समेत लालीगुराँसलाई समावेश गरिएको छ। लाली गुराँसको राजधानी तेर्हथुमको टीएमजे क्षेत्र बसन्तपुरमा २९ प्रकारका गुराँस पाइन्छ भने नेपालका विभिन्न पहाडी भुभागमागरी ३३ प्रकारका गुराँस पाइने बताइएको छ। समुद्री सतहबाट गुराँस एक हजार ३०० देखि चार हजार ६०० मिटर सम्ममा पाइन्छ लाली गुराँस फूल अक्सर वसन्त ऋतुमा फुल्छ भने हावापानी र पहाडी भेगको फरक बनावटले पुस देखि बैशाख सम्म पनि फुलेको भेटिन्छ।
यो फूल पहाडी भेगमा पाईने गुराँसको फूल हो। फूलको रंग रातो हुन्छ। नेपालको राष्ट्रिय फूल भएका कारण लालीगुराँस धेरैपटक हुलाक टिकट तथा हुलाक वस्तुमा प्रकाशन भइसकेको छ । फूलको आकार औसत अरु फूलहरू भन्दा केही ठूलो हुन्छ भनिन्छ साना देखि कतै कतै त नाङ्ग्लो जात्रा गुराँस पनि भेटिन्छन । यसको पात लामो हुन्छ। पातको लम्बाई लगभग ५ देखि १० से.मी.सम्म हुन्छ। यसको रुखको उँचाई र आकार ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ। निम्न पहाडी भू-भागमा यसको रुख मध्यम खालको हुन्छ भने उच्च पहाडी भागमा यसको रुख धेरै ठूलो र झ्याम्म परेको हुन्छ।अङ्ग्रेजीमा ‘रोडोडेनड्रन’ भनेर चिनिने यो मनमोहक फूलका विभिन्न प्रजाति संसारभरि नै पाइन्छ। नेपालका पहाड पर्वतमा लाली गुराँस फूलेर बनजंगल ढकमक्क हुँदा पुरै बन जंगल रंगीन भै सिङ्गारिएको दुलही घरजस्तै सुन्दर देखिन्छ।
विश्वमा लालिगुराँससँग मिल्दोजुल्दो प्रजातिका अन्य ५ गुराँसहरू पनि पाइन्छन्। यसै वर्गमा पर्ने सेतो गुराँस अर्थात चिमाली ३ हजार मीटर भन्दा माथिको उचाइमा पाइन्छ। यसको फूललाई जुस बनाउने काममा प्रयोग गरिन्छ। यो पतझड वर्गमा पर्दछ। यसको रूख होचो झ्याम्म परेको हुन्छ जुन धेरजसो भीरालो ठाउँमा उम्रन्छ। उच्च पहाडी भेकमा पाइने यो वनस्पति धेरै जसो ठाउँमा चैं फागुन-चैत्र-बैशाख महिनामा फूल्ने गर्दछ। नेपालमा पाइने लाली गुराँसका प्रजातिहरू औषधि मानिन्छन्। लाली गुराँस घाँटीमा खानेकुरा वा अरु केही चीज अड्किएको बेलामा खाँदा खड्किएको चीज निस्कन्छ भनिन्छ, मान्यता चैं रमाइलो छ मान्छे वा पशु चौपायाले कहिँ खानेकुरा अड़काए गुराँस -गुराँस भनेर सुनाउदा मात्रै पनि अड्केको खानेकुरा कि निलिन्छ कि ओकलिञ्छ ! त्यसैले पनि यसलाई औषधि मानिन्छ ।
यो फूल नेपालको राष्ट्रिय फूल भएकाले यसप्रति हाम्रो भावनात्मक प्रेम र सम्मान पनि छ । यो फूल हेर्नमा जति राम्रो छ,उत्तिकै गुणकारी पनि छ । आयुर्वेद औषधिहरूमा गुराँस फूलको प्रयोग हुँदै आएको छ । रातो रङ्गको गुराँस पोषक तत्वले भरिपूर्ण मानिन्छ भने गुराँसको जुस कलेजो, मृगौलाजस्ता समस्यामा निकै उपयोगी हुन्छ । हृदय रोग लगायत केही गम्भीर रोगमा गुराँसको जुस सेवन गर्नु लाभदायक मानिन्छ । यसको जुसले हड्डीको दुखाइ र उच्च रक्तचापमा फाइदा पुर्याउछ। गुराँस एउटा मौसममा मात्र पाइने भएकाले अन्य बेला प्रयोग गर्न यसको फूललाई सुकाएर राख्न सकिन्छ । गुराँसको फूल घरको मूल ढोकामा सजाउँदा घरमा नकारात्मक ऊर्जा भित्रिँदैन भन्ने मान्यता छ । विश्वको सबैभन्दा अग्लो लालीगुराँसको बोट नेपालमा रहेको छ। इलाम जिल्लाको मंगलबारेमा रहेको १६.१ मीटर अग्लो सो लाली गुराँसलाई गिनिज बुकले विश्वको सबैभन्दा अग्लो गुराँसको रूपमा अङ्कित गरेको छ।
लेखक भण्डारी रेडियो थाहा सञ्चारमा आवद्ध सञ्चारकर्मी हुन् ।